Aza heverina ho toy ny anaty fety na kermesy sy andro tsy iasana fa handraisan-karama isika, hoy ny minisitry ny atitany izay omaly.
Mandalo fotoan-tsarotra ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Sambany angamba ny Malagasy, indrindra ny eto an-Renivohitra no norarana tsy hivoaka ny trano, kanefa tsy tany miady na misy krizy ara-politika goavana. Azo hitarafana ny fahazakantsika sedra sy handanjana ny fahefam-panjakana io hoe: hatraiza ny fankatoavan'ny olona manam-pahefana?
Hifamelona sy hifamono?
Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena. Tena mbola tsy nisy angamba ny toy izao, raha ny endriny no jerena. Sedra iraisana amin’izao tontolo izao anefa io amin’ny lafiny iray.
Mbola samy miandry ny fandaminana tena matotra hanombohana azy ny rehetra na dia efa 7 volana aza no lasa. Tsara ampatsiahivina hatrany fa vina tokony ho notontosaina tao anatin’ny 58 taona no napetraka ho fanamby fa hihazakazahana ao anatin’ny 5 taona monja. Izay no veliranon’ny filoham-pirenen’i Madagasikara. Samy mahatsikaritra anefa ny maro ankehitriny fa mbola mijanona ho finiavana sy vina ihany iny nolazaina fa tetikasa goavana hanandratana ity nosy ity ao anaty fotoana fohy iny. Ny fizotry ny asa kosa dia andrasana ihany koa ny fanazavana matotra tsy miolakolaka avy amin’ireo tekinisianina nampisahanina izany. Mbola averina ihany ny fanontaniana hoe inona ilay tanterahana IEM sa Velirano ary aiza ho aiza ao anatin’izany ny toeran’ilay politika ankapoben’ny fanjakana ? Sa moa praograma koa izy io ? Raha ny fanazavan’ny manampahaizana moa dia tokony haherin’ny 20 taona no fanatontosana izany atao hoe vina izany. 10 ka hatramin’ny 20 taona izy raha drafitra. 5 ka hatramin’ny 10 taona kosa raha politika. 3 taona raha praograma ary 1 ka hatramin’ny 2 taona raha tetikasa. Ka inona ao anatin’izany rehetra izany ary no ketrehin’ny fitondrana hoe hampandrosoana ny vahoakany haingana ? Miandry fandaminana matotra avy aminy.